Gpws कुनै विमानमा काम नगरेको छैन
प्रश्न Gpws कुनै विमानमा काम नगरेको छैन
1 वर्ष9महिना पहिले #760 by aamalk
म5को आसपास को विमान मा जोडें dowlaoded ले भन्यो कि यसमा gpws छ, तर म केहि केहि नहीं सुनना जब landing.do तपाईंलाई कहीं सक्षम गर्न को लागि या यो स्वचालित रूप देखि काम गर्दछ?
1 वर्ष4महिना पहिले - 1 वर्ष4महिना पहिले #937 by DRCW
FSX ध्वनि फाइलहरू Dll फाइलहरू प्रयोग गरेर सक्रिय हुन्छन् र 64 बिट संस्करणले तिनीहरूलाई Xml प्रयोग गरेर सक्रिय गर्दछ। यदि तपाईं साहसी हुनुहुन्छ भने तपाईले यी फाइलहरू एक्सएमएलमा बदल्न सक्नुहुन्छ
यद्यपि यसको नाम FSX लाई बुझाउँछ, यो गेज पनि FS2004 मा काम गर्नेछ। यो भारी रूपमा dsd_xml_sound3.gau मा आधारित छ।
gauge10 = dsd_fsx_xml_sound! ध्वनि, 2,2,2,2,। / gauges / dsd_xml_sound.ini
gauge11 = dsd_fsx_xml_sound! डिबगर, 420,550,600,80
गेज प्रकार्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भोल्युम सेटिंग्स ह्यान्डल गर्ने तरिका हो। गेजको अघिल्लो संस्करणहरूले0बाट 100 बाट दायरा प्रयोग गर्न / सेट भोल्युम स्तरहरूको लागि प्रयोग गर्यो। मैले यो DirectSound द्वारा प्रयोग भएको दायरामा परिवर्तन गरेको छ, -10000 (धेरै, धेरै शान्त छ)0लाई (पूर्ण भोल्युम प्रतिनिधित्व गर्दै)। यदि यो परिवर्तन तपाईंको अवस्थित कोडसँग समस्याको कारण हुन सक्छ भने, गेज पुन: भोल्युम सेटिंग्स ह्यान्डल गर्ने पुरानो तरिकामा बल गर्नका लागि चर (L: पुरानो भोल्युम नियन्त्रण) सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तल हेर।
गेजको अघिल्लो संस्करणहरू प्रयोग गर्नुभएकाहरूका लागि, प्रत्येक आवाजले अलग XML एल द्वारा नियन्त्रित गरिएको छ: चर (जसलाई पछि LVar को रूपमा उल्लेख गरिएको छ।) तपाईले नियन्त्रण नियन्त्रण (LVar) लाई नियन्त्रण गर्ने मानमा नियन्त्रण गर्दछ। तपाईलाई चाहानुहुन्छ। तपाईंले कन्फिगरेसन फाइल प्रयोग गरी ध्वनिहरूमा LVars प्रदान गर्नुभयो। कन्फिगुरेसन फाईल panel.cfg मा, "ध्वनि" गेज तत्वको लागि पाँचौं प्यारामिटरको रूपमा निर्दिष्ट गर्नुहोस् - माथि उदाहरण हेर्नुहोस्। एक विन्यास कन्फिगरेसन फाइल स्ट्रिङको मूल्यांकन गर्न निम्न विधिहरू पालन गर्नेछ:
1। तपाइँ यसलाई 'डट' संग सुरू गरेर एक सापेक्ष मार्ग निर्दिष्ट गर्दछ - नमूना सिन्ट्याक्स हेर्नुहोस्, माथि। यो डट प्रभावी ढंगले हामीलाई मुख्य FS फोल्डरमा लुट्छ। माथिको उदाहरणमा, .ini फाइल मुख्य FS gauges फोल्डरमा अवस्थित छ, र यसलाई dsd_xml_sound.ini भनिन्छ। तपाईं FS gauges फोल्डरमा सीमित हुनुहुन्न, तपाईले कुनै मनपर्ने फोल्डर निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको मात्र चुनौतीले सुनिश्चित गरेको छ कि अन्तिम प्रयोगकर्तासँग तपाइँको FS फोल्डर प्रणालीमा निर्दिष्ट गरिएको फोल्डर हो। यो ध्वनि गेजको अघिल्लो संस्करणहरूद्वारा प्रयोग गरिएको विधि हो।
2। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ तपाइँको कन्फिगरेसन फाइलमा पूर्ण मार्ग निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। गेजले यसको आफ्नै बाटो योग्य नाम देख्नेछ। गेजको नामबाट हटाउने गरी, हामी निर्दिष्ट फोल्डरको बाटोमा बाहिरिन्छन् जहाँ गेज स्थापना गरिएको छ। यो बाटोको नाममा, तपाइँले निर्दिष्ट फोल्डर र फाइल नामको कन्फिगरेसन फाइलको लागि थप्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि, मेरो सामान्य परीक्षक विमान स्थापना गरिएको फोल्डरमा स्थापित छ:
प्यानल फोल्डरमा गेज स्थापना गर्दै, र यस प्रकार कन्फिगुरेसन फाइल निर्दिष्ट गर्दै:
gauge37 = dsd_fsx_xml_sound! ध्वनि, 2,2,2,2, \_ dsd_fsx_test_sound.ini
विन्यास निर्दिष्टीकरणको परिणाम हुनेछ
D: \_ fsx \_ विमानकफ्ट \_ b777_300 \_ प्यानल \_ dsd_fsx_test_sound.ini - कन्फिगरेसन फाईललाई विमानको प्यानल फोल्डरमा राख्नुहोस्, ध्वनि गेजको साथ
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यस विधिको साथ, प्यानलको सुरुआतमा कुनै 'डट' छैन। पैरामीटर स्ट्रिंगमा, तर string / / वा क्यारेक्टरको साथ सुरु हुन्छ। गेजले / र \_ क्यारेक्टरहरू समान रूपमा व्यवहार गर्नेछ।
3। यदि गेजले प्यारामिटर स्ट्रिङको सुरुमा डट वा स्लाश क्यारेक्टर फेला पारेन भने, यो बृहत् क्यारेक्टरका लागि स्ट्रिङ खोजी गर्नुहोस् ":" यदि यो एक फेला पर्यो, यसले मानिन्छ कि तपाईंले ड्राइभ पत्र सहित पूर्ण मार्ग प्रदान गर्नुभएको छ, कन्फिगुरेसन फाइलमा र कुनै समायोजन बिना यो लोड गर्न प्रयास गर्नेछ।
म तपाईंको कम्प्युटरमा निजी प्रयोग भन्दा अन्य कुनै पनि चीजको लागि यो दृष्टिकोण सिफारिस गर्दैन। कन्फिगरेसन फाइल स्ट्रिङ निर्दिष्ट गर्दै जस्तै "D: \_ fsx \_ gauges \_ sound_config.ini" यदि तपाईँ प्यानल वितरण गर्दै हुनुहुन्छ भने समस्याको लागि सोध्नुहुन्छ। हामी वास्तवमा थाहा छैन कि अन्तिम प्रयोगकर्ताले FS स्थापना गरेको छ।
4। यदि गेजले ":" क्यारेक्टर फेला पारेन भने, यो अनुमान हुनेछ कि तपाईं एउटै तरिकामा प्रक्रिया2माथि माथिको बाटो निर्दिष्ट गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यसले प्रदान गरिएको प्यारामिटर स्ट्रिङमा पथमा संलग्न गर्नेछ जहाँ गेजबाट लोड गरिएको हुन्छ, आवश्यक रूपमा स्लैश क्यारेक्टर प्रदान गर्दछ। मेरो परीक्षण विमानको उदाहरणसँग रहँदै, प्यानल फोल्डरबाट लोड हुने गेजको साथ, कन्फिगुरेसन फाईल स्ट्रिङ प्रदान गरेर यो:
gauge37 = dsd_fsx_xml_sound! ध्वनि, 2,2,2,2, प्यानल_sounds \_ dsd_fsx_test_sound.ini
D: \_ fsx \_ विमानकफ्ट \_ b777_300 \_ प्यानल \_ प्यानल_sounds \_ dsd_fsx_test_sound.ini
5। पूर्वनिर्धारित कन्फिगरेसन फाइल यदि कन्फिगरेसन फाइल निर्दिष्ट गरिएको छैन, वा गेजले फाइल निर्दिष्ट गर्न सक्दैन, यसले पूर्वनिर्धारित नाम प्रयोग गर्नेछ। गेजले यसको आफ्नै बाटो योग्य नाम देखाउँदछ (यदि तपाईँ वा अन्त्य प्रयोगकर्ताले यसलाई पुन: नामाकरण गरेको छ), ".gau" फाइल एक्सटेन्सनलाई पट्टी बन्द गर्नुहोस् र ".ini" थप्नुहोस् "पूर्वनिर्धारित कन्फिगुरेसन फाइल" गेज, एउटै आधार नामको साथ। यो विधिले धेरै विन्यासमा विन्यास फाइल निर्दिष्ट गर्न आवश्यकता घटाउनुपर्दछ। ध्यान दिनुहोस् कि यदि गेज पूर्वनिर्धारित प्रयोग गरिरहेको छ किनभने तपाईंले कन्फिगरेसन फाइल निर्दिष्ट गर्नुभएन भने, यो सजिलै थप एडो बिना। यद्यपि, यदि यसलाई डिफल्ट प्रयोग गरिरहेको छ किनभने यसले तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुभएको फाईल फेला पार्न सकेन, यो तपाइँले बताउनुभएको Windows सन्देश बाकस पप गर्नेछ।
कन्फिगरेसन फाइल सिर्जना गर्दै
कन्फिगुरेसन फाईल केहि चीजहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण आवाजहरू तपाइँले खेल्न सक्ने ध्वनिहरू बीचमा विभाजन स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँले ती आवाजहरू नियन्त्रण गर्न LVars प्रयोग गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं यस कागजातको अन्त्यमा .ini फाइल सूची नमूना हेर्नुहुन्छ, तपाइँ फेला पार्नुहुनेछ कि यसमा तीन सेक्शन शीर्षकहरू छन्। यी मध्ये, एक लेबल गरिएको छ [ध्वनि] र यसलाई लेबल गरिएको छ [LVars]। प्रत्येकमा संख्यात्मक प्रविष्टिहरूको सूची छ। सङ्ख्या छ कसरी ध्वनि र LVar को बीच लिङ्क स्थापना गरिएको छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि प्रविष्टिहरूको संख्याको लागि मात्र महत्त्व हो। प्रवेश ध्वनि Sound00 Lvar00 मा LVar संग मेल खाएको छ, Sound01 मा प्रवेश ध्वनि Lvar01 मा LVar संग मेल खाएको छ।
तपाईले अहिले सम्म एकत्रित हुन सक्दछ, कन्फिगरेसन फाइलमा LVars निर्दिष्ट गर्दा, तपाइँ भर्खरै नंगे नाम प्रदान गर्नुहुन्छ। तपाईंले "L:" मा शुरुआत गर्नु हुँदैन, वा अन्त्यमा "नम्बर"। यो तपाईंसँग XML मा चर कसरी पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ सँग यो गर्न को लागी, यो C / C ++ गेजले यी चरहरूसँग काम गर्दछ जसमा मात्र प्रासंगिक छ।
जब तपाईं आफ्नो कन्फिगुरेसन फाईलमा भ्वाईसहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं चाहानुहुन्छ भने, लोड भइरहेको आवाजमा लागू हुने भोल्युम निर्दिष्ट गर्नुहोस्। तल .ini फाइलमा पहिलो दुई ध्वनि प्रविष्टिहरू हेर्नुहोस्। यो विकल्प उपयोगी छ यदि तपाईं, वा तपाईंको उत्पादनको अन्त प्रयोगकर्ता, रेकर्ड गरिएको रूपमा एक विशेष ध्वनि वा ध्वनी महसुस गर्नुहोस्, धेरै ठूलो छन्। तपाईंले प्रयोग हुने भोल्युम निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसैले तपाईंको गेज भित्र यसलाई सेटिङलाई परेशान गर्नुपर्दैन। यस तरिकामा भोल्युम सेटिङ निर्दिष्ट गर्दै तपाइँले भोल्यूम स्तर परिवर्तन गर्न पछि रोक्न सक्नुहुन्न।
जब तपाइँ कन्फिगरेसन फाइलमा निर्दिष्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, गेजले कन्फिगरेसन फाइल नाम निर्दिष्ट गर्नका लागि ध्वनि नाम निर्दिष्ट गर्नका लागि एउटै प्रोटोकॉलहरू पछ्याउनेछ। तपाईं एक रिटेल पथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ("डट" संग सुरू गर्न सक्नुहुन्छ र FS फोल्डर रूख भित्र फोल्डरलाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ) वा तपाइँ एक निरपेक्ष मार्ग निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फिगरेसन फाइलमा आधारको रूपमा बाटो प्रयोग गरी (\_ or / as प्यारामिटर स्ट्रिंग को पहिलो वर्ण, वा प्रमुख स्ल्याश बिना फोल्डर र फाईल सूचीबद्ध गरेर।) तल नमूना .ini फाइलमा पहिलो ध्वनि सेटिङ हेर्नुहोस्। यसले फोल्डरमा प्यानलसाउन्ड नामक फोल्डर निर्दिष्ट गर्दछ जुन फोल्डरको कन्फिगरेसन फाइल फेला पर्यो, जस्तै ध्वनि फाइलको लागि स्थान।
गेजले व्यक्तिगत ध्वनि नामहरू गेज लोड समयमा प्रमाणित गर्दैन। तथापि, यसले प्रयोगकर्तालाई सूचित गर्न Windows सन्देश बाकस प्रयोग गर्नेछ जुन ध्वनि बजाउनको लागि जब एक विशेष आवाज फेला परेन।
तेस्रो समूहमा सेटिङ्हरू, [कन्फिग] प्रत्येक समीक्षा पछि पछि छन्।
आवाजहरूसँग काम गर्दै
दिइएको आवाज नियन्त्रण गर्न, यो केवल यसको LVar को लागी तल सूचीबद्ध मानमा सेट गर्ने कुरा हो जुन तपाईले चाहानुहुन्छ:
1 (> L: केहि XML नियन्त्रण गर्नुहोस्, नम्बर) आवाज बजाउँदा एक आवाज वा प्यान सेटिङहरूमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
0 (> L: केहिअन्यएक्सएमएलएमएल नियन्त्रण गर्नुहोस्, संख्या) यदि बजिरहेको छ भने ध्वनि बन्द हुनेछ।
8 (> L: YetAnotherXMLControlVar, नम्बर) ले हालको भोल्युम र प्यान इनपुट सेटिङ्हरू पुन: प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूले तिनीहरूलाई प्रश्नमा ध्वनिमा लागू गर्नेछ र अन्तमा, लूपिंग मोडमा आवाज बजाउन सुरु गर्दछन्।
गेज नियन्त्रण चरहरू निम्न मानहरू प्रयोग गर्न सक्छन्:
0 - बन्द ध्वनि
1 - अवस्थित भोल्युम वा प्यान सेटिङहरू परिवर्तन नगरी एक पटक आवाज बजाउनुहोस्।
2 - विद्यमान भोल्युम वा प्यान सेटिङ् परिवर्तन नगरी, पाशको रूपमा बजाउनुहोस्।
3 - निर्दिष्ट भोल्युममा फेला पार्न सेटिङ प्रयोग गरी ध्वनिको भोल्युम सेट गर्नुहोस्, चर, तल हेर्नुहोस्।
4 - आवाजको हालको भोल्युम सेटिङ प्राप्त गर्नुहोस्, यसलाई निर्दिष्ट गरिएको मात्रामा राख्नुहोस् ओन्ट चर।
5 - निर्दिष्ट PanIn चरमा फेला पार्न सेटिङ प्रयोग गरी ध्वनिको प्यान सेट गर्नुहोस्।
6 - ध्वनिको हालको प्यान सेटिङ प्राप्त गर्नुहोस्, यसलाई निर्दिष्ट PanOut चरमा राख्नुहोस्।
7 - एक पटक प्ले बजाउनुहोस्, तर पहिला भोल्युम र प्यान सेट गर्नुहोस् सेटिङहरूमा फेला पार्दछ VolumeIn र PanIn चरहरू।
8 - पाशको रूपमा ध्वनि बजाउनुहोस्, तर पहिला भोल्युम र प्यान सेटअप सेटिङहरूमा फेला पार्दछ VolumeIn र PanIn चरहरू।
9 - ध्वनिको लूपिंग स्थिति पाउनुहोस्। यदि एक खेल आवाज लुपिंग हो भने 1 फर्काउँछ, यदि0ध्वनि एकपटक मोडमा हो भने वा सबै खेलिरहेको छैन।
10 - एक आवाज अनलोड गर्नुहोस्। आवाज स्वचालित रूपमा गेज बाहिर निस्कने छ, तर यदि ध्वनि फाईल ठूलो छ, र तपाईं यसको साथ गर्नुभयो भने, तपाईं यसलाई तुरुन्त अनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, र मेमोरी पुन: घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। यो आदेश परीक्षणको बेला पनि उपयोगी हुन सक्छ। तपाईं ध्वनिमा परिवर्तनहरू गर्न सक्नुहुन्छ र पुन: लोड गर्नुहोस्, सम्पूर्ण प्यानल पुन: लोड नगरी।
11 - एक आवाज लोड गर्नुहोस्, विन्डोज भ्वाईस उपकरण प्रयोग गरी। पूर्वनिर्धारित रूपमा गेजले ध्वनि बजाउनको लागि विन्डोज ध्वनि उपकरण प्रयोग गर्नेछ। यदि तपाइँ विन्डोज भ्वाईस उपकरण (सामान्यतया दोस्रो ध्वनि कार्ड, वा USB ध्वनि उपकरण) प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई 11 को मान आवाज आवाजमा प्ले गर्नको लागि ध्वनि लोड गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य सबै आदेशहरू, यदि तिनीहरूको आफ्नै प्रकार्य पूरा गर्नु अघि तिनीहरूले ध्वनि लोड गर्नु पर्छ भने, ध्वनि ध्वनिलाई Windows ध्वनि यन्त्रको लागि लोड गर्नेछ। यदि तपाईं भ्वाईस उपकरण प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँसँग यो आदेश प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ पहिले तपाईले केहि अरू गर्नु अघि ध्वनि लोड गर्न। आवाज उपकरण समान यन्त्रको रूपमा समान यन्त्र हुनुपर्छ, आवाज उपलब्ध ध्वनि यन्त्रको प्रयोग गरी लोड गरिनेछ। यदि तपाईं प्रयोगकर्ताको हेडसेट मार्फत प्ले गर्न चाहानुहुन्छ भने, यदि वर्तमान छ भने तपाई यो मान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि अर्को प्रयोगकर्तामा हेडसेट छैन भने, प्रयोगकर्तासँग कुनै पनि ध्वनि यन्त्र द्वारा समान ध्वनि खेल्न सकिन्छ। यो प्याकेजमा समावेश एक उपयोगिता हो जसले प्रयोगकर्तालाई स्पष्ट रूपमा प्रयोग गर्न गेजको लागि आवाज यन्त्रहरू निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ। मलाई आशा छ कि लगभग सबै अवस्थामा, यो उपयोगिता आवश्यक पर्दैन। यो केवल आवश्यक हुनेछ यदि प्रयोगकर्ताले Windows डिफल्ट मानहरू FS को लागि उपयुक्त छैन, तर विन्डोज डिफल्ट परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्।
12 - माथि 11 को रूपमा, तर विन्डोज ध्वनि उपकरण प्रयोग गरेर ध्वनि लोड गर्दछ।
.Ini फाइलको कन्फिग सेक्शनमा, निम्न वस्तुहरू सेट गर्न सकिन्छ। तिनीहरू सबै तिनीहरूका पूर्वनिर्धारित मानहरूसँग देखाइएका छन्।
पूर्वनिर्धारित 10 हो, तर अधिकतम अब 1000 हो। (हो, तपाईले त्यो पढ्नुहुन्छ!) म त्यो धेरै प्रयोग गरेर कसैलाई देख्न सक्दिन, तर मेमोरी गतिशील रूपमा आवंटित गरिएको छ, त्यसैले धेरै उच्च सीमामा कुनै हानि छैन। यसले समर्पित प्रयोगकर्ताहरूलाई एउटै प्यानमा गेजको एक भन्दा बढी उदाहरण लोड गर्नबाट जोगाउन अनुमति दिन्छ। मैले देखेको छु। आवाजको संख्यामा अधिकतम राख्दा तपाई वास्तव मा प्रयोग गर्नुहुनेछ गेज द्वारा दुवै CPU र मेमोरी प्रयोग कम गर्नेछ।
केही प्रकारको त्रुटिको घटनामा, गेजको नियन्त्रण चर यस मानमा सेट गरिनेछ। पूर्वनिर्धारित --1 हो। तपाईं 1 देखि 99 दायरा को बाहेक, जुन वास्तविक आदेशहरूको लागि आरक्षित छ तपाईले कुनै पनि पूर्णाङ्क मान्न सक्नुहुन्छ। गेजसँग अहिले एउटा त्रुटि भएको घटनामा देखा पर्नेछ जुन धेरै जसो Windows सन्देश बक्सहरू छन्। म आशा गर्दछु कि केवल एक मात्र तपाईँले देख्नु हुनेछ यदि गेजले .ini फाइलमा निर्दिष्ट गरिएको ध्वनि फाइल फेला पारेन। समस्या समाधान गर्न को लागी, यो प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिईनेछ जुन फाइल फेला परेन। यदि त्रुटि उत्पन्न हुन्छ भने, कि ध्वनिको नियन्त्रण चरमा कुनै पनि परिवर्तनहरू उपेक्षा गरिनेछ। तथापि अन्य ध्वनिहरू प्रशोधन गरिनेछ।
तपाईले यो चरलाई3सार्थक मानहरूमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
1 - अहिले हाल सबै बजाउने खेलिरहेको छ।
2 - mutes सबै आवाजहरू। यो -10000 मा तिनीहरूको भोल्युमको सेट छ, तर वास्तवमा उनीहरूलाई खेलिरहेको छैन।
3 - पहिले सबै आवाजहरू मौन अनमाउन्ट गर्दछ। यसले तिनीहरूको पहिले भण्डारण गरिएको भोल्युम सेटिंग्स पुनर्स्थापित गर्दछ।
प्रत्येक अवस्थामा,0मा चर रिसेट हुनेछ।
आवाज VarIn = dsd_xml_sound_volume_in
SetVolume कमान्ड (3) को साथ प्रयोगको लागि आवाज सेटिङ निर्दिष्ट गर्न यो चर प्रयोग गर्नुहोस्। भोल्युम0(पूर्ण भोल्युम) र -10000 (100 डीबी जगेडा, उद्घाटन।) को बीच मानको रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छ। व्यवहारमा, एक्स-एक्सक्स (3000 डीबी क्षुधा) भन्दा कम कुनै पनि सेटिङ सुरूवात हुनेछ।
सेटप्यान कमाण्ड (5) सँग प्रयोगको लागि प्यान सेटिङ निर्दिष्ट गर्न यो चर प्रयोग गर्नुहोस्। प्यान -10000 (पूर्ण बाँया) र 10000 (पूर्ण दाँया) बीच मानको रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छ।0केन्द्रित छ।
आवाज VarOut = dsd_xml_sound_volume_out
GetVolume कमान्ड (4) सँग पुनःप्राप्त भोल्युम सेटिङ प्राप्त गर्न यो चर प्रयोग गर्नुहोस्।
GetPan कमांड (6) सँग पुनः प्राप्त प्यान सेटिङ प्राप्त गर्न यो चर प्रयोग गर्नुहोस्।
लूपअट = dsd_xml_sound_loop_out
प्राप्त लूपिंग स्थिति आदेश (9) बाट पुनः लूप सेटिङ प्राप्त गर्न यो चर प्रयोग गर्नुहोस्।
भोल्युम प्लेले = dsd_volume_played
यो चर स्वचालित रूपमा बजाउने ध्वनि आदेश जारी हुँदा भोल्युम सेटिङ प्राप्त हुनेछ। ध्यान दिनुहोस् कि यो भोल्युम स्तर अब लाग्न सक्छ - यो SetVolume आदेशसँग परिवर्तन भएको हुन सक्छ।
अन्तिम चलिएको आदेश जारी हुँदा यो चर स्वचालित रूपमा प्यान सेटिङ प्राप्त हुनेछ। ध्यान दिनुहोस् कि यो प्यान सेटिङ अब लाग्न सक्छ - यो सेटप्यान आदेशसँग परिवर्तन गरिएको हुन सक्छ।
लूप गरिएको = dsd_loop_played
अन्तिम चर आदेश जारी हुँदा यो चर स्वचालित रूपमा लूप सेटिङ प्राप्त हुनेछ।
अन्य LVARS, नाम चयन गर्न सकिँदैन:
FS9 र FSX दुवैमा, यो चर 1 फिर्ता हुनेछ यदि FS को आवाज सक्रिय छ र0यदि तिनीहरू छैनन्। गेजको आफ्नै आवाज FS आवाजको स्थिति पछ्याउनेछ - यदि एफएसको आवाज बन्द छ भने तिनीहरू म्यूट गर्नेछ वा सिम रोकिएको छ।
पुरानो भोल्युम नियन्त्रण:
सजिलो। यदि 1 मा सेट गरियो भने, गेजले0को 100 लाई पुरानो भोल्युम दायरा प्रयोग गर्नेछ, 100 सँग पूर्ण भोल्युम र0को प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यदि0मा सेट गरियो भने, गेजले वास्तविक डायरेक्टाउन्ड दायरा प्रयोग गर्नेछ, जुन - 10000 पूर्ण रूपमा मौन गरिएको,0मा, जुन पूर्ण भोल्युमको प्रतिनिधित्व गर्दछ। ध्यान दिनुहोस् कि यदि गेजले .ini फाइलको [ध्वनि] सेक्शनमा भोल्युमहरूको लागि सकारात्मक मानहरू मान्दछ भने, यो अनुमान गर्दछ कि तपाइँ पुरानो दायरा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ र तदनुसार यो चर सेट गर्नेछ। प्राविधिक झुकावको लागि, DirectSound दायरा decnels को 100s मा क्षीण को प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसैले XXUMX को मूल्य 10000 decibels को एन्जेन्सन को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो सेट एक पटक एकपटक यो चर परिवर्तन नगर्नुहोस् - खराब चीजहरू हुनेछ।
यो चरले एक अलग आवाज उपकरण उपलब्ध छ कि संकेत गर्नेछ। यदि 1 प्रणालीसँग अलग विन्डोज आवाज र भ्वाइस उपकरणहरू छन्, र अन्यथा0फर्काउँछ।
FSVersionMajor, FSVersionMinor, FSVersion निर्माण:
यी चरहरू विस्तृत जानकारी फर्काउँछ कि उडान सिमुलेटरको संस्करणको बारेमा gauge चलिरहेको छ।
FSVersionMajor FS9 र 2004 को FSX को लागि 10 फर्काउँछ। यदि तपाइँ आफ्नो आफ्नै gauges मा कुनै पनि संस्करण निर्दिष्ट कोड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने।
सिंक जडान भयो:
FSX मात्र। यदि 1 फिर्ता लिन्छ SimConnect को लिङ्क स्थापना भयो र0यदि यो थिएन।
यदि सिमुलेशन रोकिएको छ भने 1 फर्काउँछ, र यदि0होइन।
SoundIs म्यूट गरियो:
FS9 र FSX दुवैमा, यो चरले 1 फर्काउँछ यदि गेजले आफ्नो आवाज र0मौन गरेको छ यदि ध्वनि मौन गरिएको छैन भने।
FS9 र FSX दुवैमा, यो चर 1 फिर्ता हुनेछ यदि XML गेजले2को मानमा GlobalCommands चर सक्षम गरेर ध्वनि मौन गरेको छ भने। जबकि व्यक्तिगत आवाजहरू आफ्नो भोल्युम स्तरहरू सेट गरेर अनम्युट गर्न सक्षम हुने बेला, ध्वनि स्वचालित चर वा पज स्थितिमा स्वचालित रूपमा अनम्यूट हुने छैन। तपाईंलाई3लाई विश्वव्यापी आदेश कन्वर्ट गर्न सेट गरेर मैन्युअल रूपमा अनम्युट गर्न आवश्यक छ। यदि आवाज यति म्यूट गरिएको छैन भने, चरमा शून्यको मान हुनेछ।
FSX मात्र। SimConnect मार्फत पुनःप्राप्त गरियो।
0 - बाहिर (स्थान) दृश्य।
1 - 2D ककपिट दृश्य
2 - 3D VC दृश्य
4 - ओर्थोगोनल (नक्शा) दृश्य
FSX मात्र। पूर्वनिर्धारित मान शून्य हो। यदि एक गैर-शून्य मानमा सेट गरियो भने, माथिको ViewSystemStatus मान, विन्डोज सन्देश बक्समा प्रत्येक पटक यो परिवर्तनमा प्रकाशित गरिनेछ। जाहिर छ, केवल प्रयोगको लागि।
दिन को समय:
FS2004 मात्र। चरको अन्यथा टूटेको समय फर्काउँछ।
[ध्वनि] खण्डमा पहिलो दुई प्रविष्टिहरूको अपवादको साथ, निम्न उदाहरणले पूर्वनिर्धारित मानहरू वर्णन गर्दछ जुन गेज प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता निर्दिष्ट मानको अनुपस्थितिमा प्रयोग गर्दछ वा सम्पूर्ण कन्फिगरेसन फाइलको अनुपस्थितिमा। पहिलो ध्वनि प्रविष्टिले प्यानलसाउन्ड नामक फोल्डर भित्र अवस्थित आवाजको विवरण निर्दिष्ट गर्दछ, यो फोल्डर विमानको प्यानल फोल्डर भित्र अवस्थित छ। पहिलो दुई ध्वनि प्रविष्टिहरूले भोल्यूम मानको निर्दिष्टतालाई ध्वनिमा सौंपाएको देखाउँछ जब यो गेज द्वारा लोड हुन्छ। पहिलो र तेस्रो प्रविष्टिहरूले फाइलको विवरण, फोल्डर भित्रको वर्णन गर्दछ, त्यो फोल्डर कन्फिगरेसन फाइलको रूपमा एकै फोल्डरमा अवस्थित छ।
Sound01 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_01.wav, -2000
Sound02 = ध्वनि \_ dsd \_ dsd_xml_02.wav
Sound03 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_03.wav
Sound04 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_04.wav
Sound05 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_05.wav
Sound06 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_06.wav
Sound07 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_07.wav
Sound08 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_08.wav
Sound09 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_09.wav
Sound100 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_100.wav
Sound999 =। \_ Sound \_ dsd \_ dsd_xml_999.wav